Global Voices teny Malagasy » Japana: Noana Ao Amin’ny Tany Tondra-dronono · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Oktobra 2018 15:30 GMT 1	 · Mpanoratra Chris Salzberg Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Fahasalamàna, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Sakafo, Sendikà, Toekarena sy Fandraharahàna, Zon'olombelona
Nanainga ny blaogera japoney maro hieritreritra mikasika ny fiantraikan'ny politikan'ny fiahiana ara-tsosialy ao amin'ny fireneny ny tantara vao haingana mikasika ny lehilahy iray matin'ny hanoanana [Ja] noho ny tsy nahazoany ny fanampiana ara-tsosialy, izay lasa nalaza noho ny niraketany tao anaty diary ny andro farany niainany.
Mampifandray ilay fahafatesana noho ny hanohana amin'ny politikan'ny Antoko Demokraty Liberaly eo amin'ny fitondrana ankehitriny  ny blaogera SkyTeam:
Voan'ny aretin'ny aty sy diabeta ilay marary matin'ny hanoanana. Vokatry ny [politika] ”Japana Tsara Tarehy” an'ny Antoko Demokraty Liberaly sy ny [faniriany] ”hanohitra ny herin'ny mpanohitra” ny fangalana tahaka hetsika toy ity iray ity, izay andavana fandriana ho an'ny olona marary iray.
Heverina fa tsy misy fifandraisana amin'ny fandaharanasa fiahiana ara-tsosialy mihitsy ny ankamaroan'ny olona, saingy naheno aho hoe tena sarotra be ny dingana fahazoana izany mba hahazoana ny fanampiana ho an'ny daholobe ao amin'ity faritra ity. Tokony handrakotra izany olana izany amin'ny fomba sahaza azy ny haino aman-jery, nefa … tsy misy na inona na inona mikasika izany any anaty gazety.
Mazava ho azy, misy olona mahazo ny fiahiana ara-tsosialy izay miaina ny fiainany araka izay itiavany azy… fa lasa lavitra be loatra amiko ny fanesorana ny fomba farany misy mba handraisan'ny olona izay hahafahany mivelona.
Mandritra izany fotoana izany, miresaka mikasika ilay politika henjana amin'ny lafiny fiahiana ara-tsosialy  izay ampiasan'ny governemanta ao an-toerana ao Kita Kyushu i Senm, blaogera
Tsy ny rafitra fiahiaa ara-tsosialy ve no hany haraton'aina farany? Ao Kita Kyuushuu, tsy nisy noraisina an-tanana na iray aza tamin'ireo olona noterena tamin'ny ampahany hiala tao amin'ny [fandaharanasa] fiaiana ara-tsosialy ary hita fa an-dalam-pahafatesana avokoa izy rehetra ireo.
Raha amin'ny trangan'ireo teratany sy olom-pirenena Japoney, zavatra afaka angatahan'ny rehetra ny fiahana ara-tsosialy. Kanefa, any Kita Kyushu, miezaka ny mampihatra ny ampahany izay manena ny isan'ireo fangatahana fanampiana ara-tsosialy ny antsoina hoe “fomba Kita Kyushu”, ary tena mahatalanjona ahy izany.
Mandalina tatitra iray mikasika ny politika ao an-toerana mikasika ny fiahiana ara-tsosialy ao Kyushu ny blaogera Masami , manatsonga ary maneho hevitra mikasika ireo andinin-tsoratra lehibe. Mamaritra ny fandraisan'ny olon-tsotra anjara amin'ny famolavolana fanapahankevitra momba ny tetibola ny iray amin'ireo andininy ireo:
Angamba mety hoe mibaribary izany, saingy raha ny mikasika ilay fitantanana ny fiahiana ara-tsosialy vao haingana, isantaona, ao anatin'ny tetibolan'ny filankevitra monisipaly, voaray ary resahana ao anivon'ny kaomity maharitra mifandray amin'izany ny fanapahankevitra mikasika ny fitantanambola. Neken'ny parlemanta misolo tena ny olom-pirenena ”ny fisiana fanampiana ara-tsosialy” [amin'ny maha izany azy]. Amin'ny teny hafa dia fanohanana [ity politika ity] ny olom-pirenena .
Mandinika i Masami fa :
Mora alaina sary an-tsaina [ny fanambarana hoe] ”nisy fanohanana avy amin'ny olom-pirenena” raha jerenao ny fitsapankevitra manaraka ao amin'ny faran'[ilay tatitra] (ao amin'ny pejy 47). [Tamin'ny namaky ity,] nahatsapa ny hatezeran'ireo olom-pirenena mikasika ireo olana toy ny rosia tsy azo itokiana [avy amin'ny mpiandraikitra ny fiahiana ara-tsosialy] aho.
Farany, mijery ny hoavy ary manontany ny hitondran'ny politika ankehitriny an'i Japana amin'ny hoavy ny blaogera lastchristmas:
Nefa inona izao no mety hitranga manomboka eto?
Tena fahatsapana ao anatiko ny hoe hitranga indray sy matetika mihitsy ity karazan-javatra ity.
Mety hiafara amin'ny fahazoana aretina sy ho very asa avokoa ny rehetra, noho izany, raha toa ka tsy mahazo rafi-pilaminana ara-tsosialy mandra-pahafaty na havana akaiky ny vahoaka, dia mety hitranga ny zavatra toy izao.
Toa misy olona mandray ny fiahiana ara-tsosialy foana na dia manam-bola aza, nefa na izany aza, tsy tokony hanena ny fiarovana [ny vola miditra] amin'ireo olona tena mila izany ry zareo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/10/29/128588/
 Mampifandray ilay fahafatesana noho ny hanohana amin'ny politikan'ny Antoko Demokraty Liberaly eo amin'ny fitondrana ankehitriny: http://blog.m3.com/TL/20070827/1
 miresaka mikasika ilay politika henjana amin'ny lafiny fiahiana ara-tsosialy: http://akiramenai.seesaa.net/article/52639495.html
 Mandinika : http://blog.so-net.ne.jp/self/2007-10-17
 manontany ny hitondran'ny politika ankehitriny an'i Japana amin'ny hoavy : http://lastchristmas.blog81.fc2.com/blog-entry-354.html